SIDA LOO KORO KAROOTADA WAAWEYN OO MACAAN EE BEERTA: SABABTA AY U SOO BAXDAY MA AHAN MID WEYN, WAXA LA SAMEEYO SI AAD U DHEER IYO CASIIR LEH, IYO SIDOO KALE LIIS AH EE NOOCYADA FOR OPEN GROUND - BEER CAGAARAN
Waa maxay sababta karootada u soo bixi kartaa yar yar? Sida loo kobciyo khudaar waaweyn oo macaan, kuwaas oo noocyo ay ka fiican yihiin?
Tilmaamaha tayada muhiimka ah ee dabacasaha ayaa ah sonkorta sonkorta, cabbirka ballaadhan iyo xitaa qaab.
Si ay u koraan karootada sonkorta leh, ballaaran iyo qallafsan, goob qorrax leh ayaa loo diyaariyey horay, iyo potash iyo Bacriminta fosfat waxaa lagu soo bandhigay dayrta. Waxay u qodeen si qoto dheer, xoqan, waxay mararka qaar ku shubaan sariiraha ciid.
Ka dib markii la beero, fiiro u yeelo saxda ah ee waraabka iyo bacarimiso. Waxa kale oo muhiim ah in la doorto darajo sax ah. Ku saabsan tan iyo wax badan - in maqaalku.
Liiska waxyaallaha beerashada ee saameeya tayada xididka
Sababaha dabacasaha yaryar, macaan iyo dabacsan:
Dhagax adag ama dhoobo dhulka.
Nafaqada kaneecada ka hooseeya 5.5.
Kala doorasho khaldan ee noocyo - halkii F1, karootada dabiicadda F2 leh calaamadaha xididka duurjoogta ah.
Fudud oo ah waraabinta bilowga xilli ciyaareedka.
Yaraanta qaybaha macdanta muhiimka ah, gaar ahaan potassium.
Sameynta xad-dhaaf ah organik cusub.
Waxyeello siinta caleemaha dhoobada.
Markaad dooranayso darajo, fiiri tayada ilaalinta tayada. Karootada loogu talagalay kaydinta muddada dheer waxay ka gaabinayaan inay dhadhamiyaan noocyada loogu talagalay isticmaalka degdegga ah.
Sababta ugu weyn ee sonkorta sonkeedu hooseeyo waa yaraanta potassium iyo fosfooraska. Tujirrada fosforsiga waxay kordhisaa heerka sonkorta, potassium waxay saameeysaa koritaanka unugyada iyo samaynta qashir xashiishka. Macmacaanka khudradda dhulgariirka loo yaqaan "acidified" ayaa aad u yaraaday.
Si aad uhesho:
1 jeer 6-8 sano lime goob.
Ash geed ayaa lagu darayaa marka qodaya 0.5-1.2 kg halkii 1 m2.
Digniin! Goosashada ugu dambaysa ee xididka ayaa ka sii daraysa dhadhanka iyo qudaarta dhadhamin kara qadhaadh.
Maxay noqon kartaa karootiga beerta yar yar?
Carrot wuxuu jecel yahay qoyan dhexdhexaad ah, si wanaagsan loo dabacsan yahay oo ciidda iftiin leh helitaanka oksijiin ku filan nidaamka xididka. In ciidda madow ama culus, xajmiga xididka ayaa aad u yar. Khudradda dalbanaysa qoyaanka bilowga xilli sii kordhaya.
Gaar ahaan waxa ay si xun u saameysaa koritaanka:
Ciidda culus ee aan la daaweyn.
Qufac heer sare ah ka dib waraabka ama roobka.
Nadiifinta sinnayn la'aan.
Tilmaamaha tallaabo tallaabo ah: sida loo sameeyo si weyn, macaan iyo casiir leh?
Tixgeli waxa loo baahan yahay in la sameeyo si aad u karisid beerta beerta oo koray, oo sidoo kale ahaa macaan iyo casiir leh. Si aad u hesho dalag tayo leh, waa inaad raacdaa xeerarka qallafsan..
Doorashada saxda ah ee meesha iyo kuwa horay loo soo doortay
Karootadu waxay u baahan yihiin qorrax aad u badan si loo dhiso qaybta kor ku xusan iyo dalagga dalagga. Dalagyada sare - hadhuudhka, gabbaldayaha sida deriska waxaa lagu beeray oo keliya dhinaca waqooyiga si looga fogaado shoogga.
Karootada ayaa si weyn u koraaya ka dib markii hore:
Caawin! Haddii aan beeraha beerta lagu beerin sariiraha, dabacasaha waxaa lagu celiyaa sariir isku mid ah 3-4 sano kadib.
Waqtiga ugu fiican ee beeridda ee dhulka u furan
Shuruuduhu waxay ku xiran yihiin gobolka, cimilada, xaaladaha cimilada. Karootada dhirta, taas oo lagu beeray dayrta, iyo sidoo kale noocyo hore ee beeritaanka guga.
Noocyada dhulka Waqtiga
Beeraha xilliga qaboobaha Dhamaadka dhammaadka bisha Nofembar, dhulku waa inuu yareeyo wax yar
Beeridda noocyo hore Qeybta labaad ee Abriil ee ciidda Qodob badan oo qoyaan ka dib baraf baraf ah
Dalagyada noocyada bartamihii bartamihii Dhammaadka Abriil, Bilowga Maajo, Dhulku waa diiran yahay oo yaraa la qalajiyey.
Beerista noocyada daba-galka ah Dhamaadka May, labaatankii sano ee ugu horreeyay ee Juun
Diyaarinta ciidda gaarka ah
Karootada ayaa dalbanaya xayawaanka carrada. U soo jeeda iyada:
Cufnaanta dhulka la kordhiyay way fududahay in la hagaajiyo.:
Si tan loo sameeyo, samee gu'ga 1 m2 ee 1 baaldi oo ciid ah.
Waxay ku sameeyaan qoto dheer oo qashin ah oo ku yaal xayndaab xaji ah, waxay ku dabooshaa qadhaadh.
Jilacsanaan iyo dheecaan ka badan dhulku wuxuu noqdaa mid weyn, oo xididdada waaweyni koraan.
Sand waxaa lagu kala firdhin karaa inta u dhaxaysa safarka, wadista carrada marka dabacsanaan.
Waxaad ku beeran kartaa karootada sariiraha sanduuqyada. Si arrintan loo sameeyo, waxay ka buuxsamaan ciidda dabacsan ee ciidda:
Qodobka ugu fiicnaanta ee gelinta substrate waa 30-40 cm. Wixii karootada, aaladda yar ee alkaliin ama carrada dhexdhexaad ah ayaa loo baahan yahay, oo leh pH ah inta u dhaxaysa 6.5-7.
Hagaajinta tayada ciidda iyo dhadhanka karootiga wuxuu ka caawiyaa sideratov beero:
Qallajin leh daaha daboolka ah ilaa 10 cm waxay saameyn fiican ku leedahay ballaarinta
Laga soo bilaabo waafaqsanaanta xeerarka teknoolajiyada beeraha inta badan waxay ku xiran tahay suuqa suuqyada iyo dhadhanka dhadhanka:
Dhulka xoogga leh waxay ku qabtaan dhul wanaagsan:
Dhuxul-samaynta qallajin ilaa 40 cm.
Substrate humus-ash ayaa hurda.
Soo qaado miraha 1-2 qaybood iyo saydhaa.
Sababtoo ah fowdada dabiiciga ah ee dufanku, dhadhanka cagaarka ayaa noqda qadhaadh, koritaanka dalagyada xididku hoos u dhaco. Si loola dagaallamo cayayaanka, boodhka tubaakada waxaa lagu shubaa inta u dhaxaysa safarka. Loogu gooyey ujeedada looga hortagayo geedo khafiif ah.
Bishii kowaad kadib markii la beero, biyaha waa mid ballaaran, si ay ciidda waxaa lagu qooyay ilaa 15-20 cm qoto dheer. Inta jeer ee lagu waraabiyo 2-3 jeer toddobaadkii. Tartiib tartiib tartiib ah 40-45 maalmood Tirada isku dhufashada iyo tirada ayaa hoos u dhacda.
Baahida seedling sii kordhaya qolka si ay u koraan. Khafiifinta waqtiga khafiifinta waxay hagaajisaa xoqitaanka dalagyada xididka. Masaafada ugu fiican waa 3-5 cm. Khafiifinta ugu horeysa waxaa lagu fuliyaa joogitaanka 1 caleen dhab ah.
Si aad u kariso macaan, macdanta waxaa loo isticmaalaa quudinta.. Marka lagu soo saaro arrimo dabiici ah - digada ama compost, cawska kor ku xusan wuxuu u koraa si dhakhso ah, iyo dalagyada xididku waxay noqdaan kuwo qulqulaya, aan dhadhan lahayn, xajmiga iyo qalafsanaan. Karootada ayaa gebi ahaanba googooyi doona dushooda, xididdadu waxay dhadhamiyaan dhadhanka aan fiicnayn.
Dharka dabiiciga ah wuxuu gacan ka geystaa sariiraha iyaga oo horay u ahaa - bocorka, baradhada, zucchini.
Waxyaabaha sonkorta ee karootada ayaa kordha 30-50%:
Isku dar ah dhirta fosfooraska.
Ash geed, sida ilaha potassium, boron, manganese.
Caawin. Marka la isticmaalo sulphate manganese ee saamiga 1 illaa 10 biyaha, maadada sonkorta iyo carotene ayaa kordhay.
Biyo u goysey. Haddii karootada aan macaan ahayn, diyaariso xal of boric acid for buufinta sariiraha ee saamiga soo socda:
2 tbsp. boron.
4 l. biyaha.
Dharka dabiiciga ah waxaa laga sameeyaa qeybta labaad ee bisha Agoosto. Dhowr jeer karootada ayaa ku quudinaysa qaabdhismeed adag.
Wixii bacriminta diyaariya xal of qaybaha soo socda:
Biyaha 10 l
Nitrateum potassium 20-25 g
Superbosphate laba jeer 15 g
Codso dharka 3 jeer xilli ciyaareed:
Marka hore. 10-14 maalmood laga bilaabo xilliga soo baxa ee caleemaha.
Labaad iyo saddexaad. 2 toddobaad kadib markii hore.
Wanaag wuxuu kordhiyaa suuqgeynta ash qoryaha. Ku darsaday grooves ee qiyaasta 100 g halkii 1 m2.
Goosashada saxda ah
Si aad u miirto dalagyada xididka ah waxay sii wadaan cimilada qalalan. Waa wax aan loo baahnayn in la qodo dalagga ka dib roobka; Waxay noqoneysaa mid biyo ah oo lumisa macaan.
Kadib waxaad daawan kartaa fiidiyo u sheegaya talaabo tallaabo ah sida ninkii beerta ka shaqaynayay uu u shaqeyn lahaa si uu u koro karootada macaan iyo ballaadhan:
Noocyada ugu caansan ee leh midab liin leh, sonkorta iyo jidhka jilicsan, qiyaaso waaweyn.
Cun macaan. Qayb yar. Celceliska miisaanka waa 80-100 g. Maqnaanshaha goor dambe. Lacagaha - dhimashada, wax soo saar, dhadhan weyn.
Olympus. Heerarka sare ee carotene iyo sonkorta. Wuxuu ku koraa dhererka illaa 22 cm, midabkiisu waa casaan-casaan.
Marmalade. Shubanka sonkorta leh ee Bisaylkiisa ee shuruudaha celceliska. Miisaanka 140-200 g Muddada dheer lagu kaydiyo.
Caramel. Jirka ayaa ku jira sonkor badan. Ujeeda carruurta iyo cuntada, baradho la shiiday iyo casiir. Dhererka 15-20 cm.
Amsterdam. Kala duwan dhexdhexaad ah. Saxarka ayaa ah mid sonkor leh, casiir leh, qallalan. Miisaanka 140-200 g Dhererka 20 cm.
Nastena Slastena. Maqnaanshaha 76-120 maalmood. Xudunta waa yar tahay. Miisaankaaga min 80 ilaa 180 g
Honey iyo sonkorta. Iskudhiga sareeya ee dhexdhexaad ah ee Bisaylkiisa hore. Foomku waa cylindrical. Iyadoo caraf udgoon iyo heer sare oo sonkor ah.
Large iyo dheer
Chantenay Royal. Waxay ku koraan ilaa 18-20 cm dherer. Miisaanka ayaa ku kala duwan 0.2 kg. Hagaajinta kaydinta.
Baltimore. Isku xidhka kooxda Berlicum. Cabbirka 1 khudradoodu wuxuu gaaraa 250 g, waa sarreeyaa -120 t / ha.
Jerada. Gardoonka hore. Soo noqoshada dalagga 90 maalmood. Miisaanka 200-250 g, dherer 25 cm, dhexroor 5-6 cm.
Abaco. Iskuday ka dib 110 maalmood. Cabbirka celceliska waa 18-20 cm Wadada 4-6 cm.
Qofna kuma jecla dabacasaha qadhaadh iyo qiyaas yar. Si ay u koraan dalagyada quruxda quruxda leh dhadhan fiican, waxay ku beeraan abuurka ciidda dabacsan oo leh ciid iyo peat, dhuuban baxay, loosen isdhexgalka isku xirka. Quudiyo dhowr marxaladood oo leh xalal macdan oo leh maaddooyinka qasabka ah ee potassium, fosfooraska, iyo boron.